Amandla isinqumo senkantolo, okuyinto sacala kusebenta. iseluleko sezomthetho
Wina inkantolo - akusiwona ukunqoba. Kuyinto kuphela inzuzo yesikhashana. Ekugcineni, it iphela uma amandla isinqumo senkantolo, okuyinto sacala kusebenta. Okuningi mayelana ukuthi.
Kuyini amandla isinqumo senkantolo, okuyinto sacala kusebenta
Nasi theory. Amandla isinqumo senkantolo, okuyinto sacala kusebenta, ngempela kusho isinqumo okwakungenzeka ngenxa bonke abahlanganyeli kule nqubo.
Lokhu kusho ukuthi ngemva kokunqoba ngo inqubo kubalulekile ukulinda isikhathi esithile, ngemva kwalokho kungaba khona ngokunembile ukuphuza champagne. Uqinisile kangakanani kuncike ubunjalo umbango. Lapho engena amandla isinqumo senkantolo? Kukhona izimiso ezivamile amacala jikelele civil. Isikhathi kuxhomeke ekutheni enye inhlangano bafake isikhalo ngokumelene sinqumo noma cha. Uma kungenjalo, isinqumo senkantolo esimweni ngokuqondile nje kuphela ngemva kwenkathi kungenzeka ukufaka isikhalazo. Ngokwesibonelo, uma unayo izinsuku ezingu-30 ukukhalaza ezingu-31 ungakwazi ukugubha impumelelo enkantolo. Kodwa nakhu zonke isihlobo. Abaphikisi ungalulama zokukhokha ukufaka isikhalazo. Kulokhu, isinqumo singenakushintshwa is selihlehliselwa umhlangano lebhodi eNkantolo yesiFunda. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye sinqumo isikhalo oyakungena force.
Yiqiniso, ungakhansela kuyo iNkantolo Ephakeme. Ngokwesibonelo, bobabili ecaleni lamademeshe:
I Civil Division zeNkantolo Ephakeme.
Ukuze ufake i-amacala amademeshe kokubili Isenzakalo esingenhla unikezwa izinyanga eziyisithupha ngoba lobugebengu - unomphela. Kodwa ngisho ukudlula olunezinyanga eziyisithupha eside elinye eqembu kungase alulame zenqubo sikhatsi lesitsite ukufaka. Yiqiniso, ngaphandle ekuyalela kahle, ube nezizathu ezizwakalayo elula ngakho-ke angakwenzi, kodwa, ngokomthetho zihlale kulabo abayidingayo. Ngakho-ke, isinqumo yezinkantolo Russian njalo kukhanselwe futhi washintsha.
Uma lo omunye party esikhathini eziqokiwe isikhalo maqondana isinqumo okokuqala, kulesi simo kungaba ekugcineni ijabule emva umhlangano webhodi nokuncenga enkantolo yesifunda. Isikhathi Yiqiniso, ngeke zephuze.
Ngokwesibonelo, isinqumo inkantolo ngenxa yokwephula nesivumelwano sokubolekwa imali. Okweletayo ubophekile ukukhokha lemali edingekayo. Ekufakeni isinghonghoyilo asinikezwayo izinsuku ezingu-30. Kwakuthinta ngemva kwalesi sikhathi, isinqumo sesingasebenza. Kodwa ungakhohlwa ukuthi ngaphansi kwezimo ezithile kungaba ayibuyisele.
Kweleti onibekele izinsuku 29 emva isikhalo ke kufanele ulinde umhlangano we Judicial IBhodi, owenza isinqumo sokugcina.
Umqondo ukwahlulela okuzenzakalelayo
Udaba usithe kakhulu ngabantu abayizakhamuzi ezejwayelekile: "Lapho Isivivinyo engekho uzangena amandla?" Lo mbuzo kuphakamisa inganekwane phakathi abameli ongenalwazi. Ihlala eqinisweni lokuthi, kusolakala ukuthi, ngaphansi kwezimo ezithile, isahlulelo okuzenzakalelayo bangawutholi nanini angene force, uma kungekhona uthole izandla zakho phezu ikhophi sinqumo.
Kubangelwa kuveze engalungile imithetho yenqubo civil. Ngokusho kwakhe, ngaphambi kwezinsuku eziyisikhombisa ngemuva kokuthola izandla zakho phezu ikhophi isakhamuzi ukuxhumana isinqumo unelungelo ukukhansela ke. Ingakapheli inyanga ngemva ukwenqaba isicelo ukwesulwa noma emva kosuku lokuphelelwa yisikhathi ngenxa yalesi senzo zenqubo kufanele afake isicelo isikhalazo. Ngakho, uma le nkantolo yanquma, futhi ikhophi yayo "ungayiboni i-" in the ibhokisi leposi futhi akusho uqobo avele ngaphambi kwenkantolo umuntu ukuyithola, angeke ize neze amandla.
Lo mbono lihlukaniswe ebusweni ngekutsi labasebenzi Federal umsizi wesikhonzi senkantolo yokulawula isikweleti, okuyimali sivimbe wonke ama-akhawunti asebhange futhi zizodla izakhiwo.
Uma kungekho muntu siyihoxisa, ukwahlulelwa ezizenzakalelayo inkantolo kuziwa phakathi force emva kokuphothulwa yonke imigomo ukufaka isikhalazo. Lokho izinsuku ezingu-40 (3 izinsuku womshini kwenzeka inkantolo inqume isinqumo, izinsuku ezingu-7 inikezwe kungenzeka yokukhansela izinsuku ezingu-30 ukuba azithobe egunyeni eliphakeme).
Ezicashile isikhathi yokutakula ekwahlulelweni okuzenzakalelayo ukubeka okuthile eceleni, noma "esiguqukayo" ukuhumusha iGceke Russian Federation Ephakeme
Sokuvuselela imigomo ku ukuqedwa obengekho sinqumo has umehluko wemisindo nemiqondo yamagama yayo. Uma esikhathini kusabusa zenkantolo, esingaphansi kosuku olunqunyiwe yesikhalazo egunyeni eliphakeme ke buyisela umugqa wesikhathi ukuthi uthumele isicelo ngokukhansela. Nokho, esikhundleni seNkantolo Ephakeme ngalolu daba, uma sikubeka kahle, iyashaywa okungaziwayo. Ngokusho echaza nokuBuyekezwa umkhuba, ngemva kwesikhathi ukufaka isikhalazo angeke afake isicelo sokuvuselela imigomo ukwesulwa sinqumo. Nokho, kuvunyelwe ukufaka isikhalazo ekuqhutshweni.
logic Legal, uma ngikhuluma iqiniso, akucaci ngokuphelele. Lokhu kuboniswa abameli eziningi. Kungani ukubuyisela ekuphileni, futhi ngakolunye alikho ikhambi elilodwa? Nokho, lokhu kubonakala nesilinganiso esifanele, njengoba izinkantolo Ngokwesibonelo yokuqala ngokwezwi nezwi ukhungethwe impahla kanye nomndeni "Yimpi." Phakathi nenhlekelele, abantu uyeka ukukhokha on loans, kaningi abahlukanisile. izinqumo zenkantolo Russian ngalezi zindaba likhula ngokushesha ngokuya ubuningi, ngokwemvelo kuphazamisa izinga lezingcingo yabo. Umkhawukho wesikhathi ukugeleza okokuqala, ngokusobala ngokuthi "ethula" yabo encane.
Inkantolo inqume - elula Izinqumo izimantshi endaweni encane, ezinye nomndeni noma ibhizinisi izingxabano. Zisekelwe olungenamkhawulo, kusukela umbono wokuqulwa kwamacala ezinkantolo, ubufakazi: izivumelwano loan, amarisidi, izenzo reception kanye ne-transmission, njll ...
Umyalelo wenkantolo lihlukile ukwahlulela okuzenzakalelayo ngalolo kulula ukukhansela. Kwanele ukubhala isikhalo, ngaphandle kokunikeza isizathu, nokuthi kuyoba okwanele ngokuya komthetho we-civil zenqubo ukukhansela ke.
Umyalelo wenkantolo kuziwa phakathi force izinsuku eziyishumi emva kwakhe icala. Uma kuzobonakala ngenxa iphutha, inkantolo yaqaphela elivumelekile, sizokwazi ukubuyisela isicelo ezifanele.
Kukhona isixazululo - akukho ukukhishwa
ERussia, ukuhlukumeza ngesinqumo senkantolo kuyingxenye uhlamvu. It kubonakala:
Ngezinye lutho, okungukuthi, okungezona ukuhambisana nezidingo sinqumo.
Izenzo okuhloswe ngaso ebezingathuntubeza ukuqaliswa zoMthetho izinqumo.
Ezinye izinqumo kufanele babulawe ngokushesha, kungashiwo, ngesikhathi uphume enkantolo. Lezi zihlanganisa:
Sokubuyiselwa isisebenzi sichithiwe ngokungemthetho.
ukondla obushade naye emuva kwesehlukaniso yokukhokha.
Ukungeza ohlwini sokhetho abavoti.
Amandla isinqumo senkantolo, okuyinto sacala kusebenta, ngempela kusho abulawe yayo. Kodwa izakhamuzi musa njalo izidingo. Ukuhluleka sangamabomu yisigwebo inhlawulo.
Okweletayo unswinyo okulandelayo:
Ukwenqaba kuhlinzeke imininingwane ngokufinyelela kwi ukuxoshwa kusukela umsebenzi wokugcina.
Ukunikeza ulwazi olungamanga ngamalungelo impahla.
Ukuziba bailiffs izidingo.
Ukwenqaba kuhlinzeke imininingwane ngokufinyelela kwi ushintsho lomsebenzi, cwaningo, eziphilayo.
Ukuze ngabanye, isijeziso zokhahlamba kusuka ayizinkulungwane 1 kuya ayizinkulungwane 2.5 ruble ..; izikhulu - ruble 10 ayizinkulungwane kuya kwezingu-20 .. amabhizinisi - ruble 35 ayizinkulungwane eziyinkulungwane 100 ...
Ukuze abantu abangekho abanamacala izidingo ze-non-ukuhambisana kwemibhalo esiphezulu langinika esihle:
Ukuze abantu yemvelo - kusuka 2 ayizinkulungwane eziyinkulungwane 2.5 ruble ...
Ukuze izikhulu - ruble 15 ayizinkulungwane kuya kwezingu-20 ...
Amabhizinisi - ruble 50 ayizinkulungwane eziyinkulungwane 100 ...
necala lobugebengu-non-ukukhishwa izinqumo zenkantolo
ngisho necala lobugebengu singenzeka for nezigaba ezithile abantu ngokwehluleka ukugcwalisa isinqumo senkantolo:
Abasebenzi kwezikhungo zikamasipala.
Abamele amandla izakhiwo.
Abasebenzi zezikhungo zomphakathi.
Nokho, hhayi noma imuphi ukwehluleka ukufeza isinqumo senkantolo kumelwe nakanjani bajeziswe "ugolovkoy". Isici esibalulekile emizameni yokuthuthukisa zobulelesi Uyinhloboni ezinonya ngokunganaki.
Ubani inquma "inzondo"?
Umqondo "inzondo" akachaziwe kule nomthetho. Nokho, umkhuba zokwahlulela iminyaka eminingi kakade zanqwabelana izibonelo ezichaza lo mqondo.
Ngakho, ngokuvumelana nezinqumo zenkantolo, mthetho - labo baba nethuba ukuhlangabezana nezidingo, kodwa hhayi ngqo wenza okukhulu ngaphandle kwesizathu. Enkulumweni yabo ngezikhathi wathola izincwadi iyalela zibhujiswe ngokushesha izidingo, kodwa futhi indiva kubo. Ngakho-ke akufanele ziphathwe wokungayifuni nezimfuneko senkantolo. Njengoba ubona, imiphumela ingaba kakhulu ezithinta isiphetho.
Isimo Ubunikazi futhi umninindawo. Yinto efanayo?
Trial ngokwayo - kuyini?
Indlela ukukhetha ummeli ezimweni ukulamula umbango.
Bhalisa of izifungo nezimpahla ezithathekayo. Registry ukubhalisa isaziso isifungo nezimpahla ezithathekayo
Indlela yokwenza melkozaglublenny strip isisekelo
Yekuchumana sendlela ukwenza indiza e "Maynkraft"
Uma-DNA - le software, owabhala ikhodi?
Merino ntambo (uvolo): ukubuyekezwa, Ukucaciswa
Operating izindleko. Kuyini lokhu?
Kanjani ukwakha umlenze ekhaya? Amathiphu ambalwa kusuka abadlali professional
Ukucaciswa okuyisisekelo kwe-Nissan X-Trail
Peach Jam: iresiphi zakudala, vanilla nut dessert
Malabsorption syndrome: Khetha ukudla ngokuqapha